Xoghayaha Britain u qaabilsan Afrika oo Hargeysa kula kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Xoghayaha dowladda Britain u qaabilsan Mark Simmons oo booqasho ku tegay magaalada Hargeysa ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo qaar ka mid ah Golaha Wasiirrada maamulkaas.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimaha amaanka, dhaqaalaha, mucaawinada iyo khilaafka ka taagan degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasoo shalay ay xoog kula wareegeen ciidamada Somaliland, markaas kadibna maamulka Puntland ku hanjabay inuu tilaabo milateri qaadayo.
Mark Simmons ayaa sheegay in UK ay sanad kasta malaayiin geniga Isterliinka ah sii doonto maamulka Somaliland, si ugu kaashado arrimaha horumarrinta.
Wasiirka reer Britain ayaa dhanka kale ka hadlay digniin horay dowladdiisu usoo saartay oo la xiriirtay in muwaadiniinta reer Britain aysan tegi Karin Soomaaliya, wuxuuna sheegay in xayiraaddaas xagga safarka ah ay ka qaadeen magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera.
“Digniinta xagga amaanka aheyd oo aan usoo jeedinay muwaadiniinteena ineysan u safrin dhulka aan Soomaaliya u naqaano, waxaan ogaanay in arrintaasi aad u dhibtay Somaliland, waxaana xayiraaddaas ka qaadnay magaalooyinka Hargeysa iyo Berebera oo ah magaalooyinka ugu aamanka badan dhulka Soomaaliya oo dhan” ayuu yiri Mark Simmons.
Xoghayaha ayaa sheegay in digniinta ay horay usoo saareen ay aheyd mid dhab ka ah dowladda Britain, arrintaasna ay ugu daneynayeen muwaadiniinta dalkooda.
Dhanka kale, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha debadda maamulka Somaliland Maxamed Biixi Yoonis, wuxuuna ku adkeystay ineysan ku saxan yihiin la wareegidda degmada Taleex ee gobolka Sool.
Maxamed Biixi ayaa sheegay ineysan jirin cid ay kala xaajoonayaan gacan ku heynta degmada Taleex, taasoo uu sheegay iney meel ka mid ah Somaliland, aysanna ogolaan doonin in lagu qabto shirar kazoo horjeeda maamulka uu ka tirsan yahay.
Wasiir Biixi ayaa ku andacooday iney wasriika reer Britain ee Mark Simmons u sheegeen iney yihiin dad nabadeed, xilli ay shalay ciidamadoodu duulaan ku qabsadeen degmada Taleex oo ah magaalo ay ku muransan yihiin saddex kooxood.